Fitantanana mampiomehy | Pakysse | Page 2
Archive for the ‘Fitantanana mampiomehy’ Category
Nalefa nitsoaka i Annick Rajaona
octobre 21, 2013 in 2013, Annick Rajaona, Copyleft, Creative Commons, Fanapareham-pahefana, Fandraisana andraikitra, Fanehoana hevitra, Fiainam-pirenena, fifidianana, Fisainana mampahonena, Fitantanana mampiomehy, HAT, Internautes, internet, journalisme citoyen, Journaliste citoyen, Madagasikara, Media citoyen, Mpanao politika, nTIC, Olom-pirenena, Politika, Revolution web2.0, T4D-M4D, Toe-tsaina mila miova, Tontolon'ny internet, Trafic d'influence, Vahoaka misy saina ny malagasy, Web 2.0
Tsy henatra, tsy tahotra, amin’izao ankatokin’ny fifidianana izao. Ny mbola nanomezana andraikitra any ramatoa « diplomatie en parallèle ».
Nefa, tsy misy tsy mahafantatra isika rehetra fa, eo amin’ny tontolon’ny politika. Rehefa omena toerana, any anaty masoivoho na manao « représentation diplomatique » ny firenena iray, ny politisianina dia « poste garage » no anaran’izany. Indrindra, manoloana izao vanim-potoana mangotraka, andalovan’i Madagasikara izao.
Midika izany fa efa manomboka mitsipaka tsikelikely, ny ekipan’i DJ mpanongam-panjakana. Rehefa avy nanao ny nataony, nitondra henatra ny fifandraisana iraisam-pirenena i ramatoa Rajaona. Dia nomena azy ny fivoahana madio sy manarapenitra.
Indrisy mankony, aoka isika tsy ho voafitaka sy ho voasarika amin’ny tsy misy antony. Satria, ny tantara dia tsy azo hadinoina. Izay indrindra tompokolahy sy tompokovavy, no mahatonga ny tena mahita fa: »Écrire l’histoire, n’est pas une utilité pour les lâches ».
Iza no mbola mila any RAJOELINA sy ny forongony amin’izao fanapotehana any Madagasikara izao?
septembre 11, 2012 in 2012, Ady Hevitra, Andry Rajoelina, Dahalo, Fahakiviana, Fahantrana, Fanapareham-pahefana, Fandraisana andraikitra, Fanehoana hevitra, Fiainam-pirenena, Fisainana mampahonena, Fitantanana mampiomehy, Fomba Fisainana Mivelatra, Kolikoly avo lenta, Madagasikara, Malagasy, Miaramila be galona malagasy tia kolikoly, Olom-pirenena, Politika, Samihafa, Toe-tsaina mila miova, Tontolon'ny internet, Vahoaka misy saina ny malagasy, Web 2.0
Pakysse mivanaka amin’ny tsy fahatogavan-tsainan’ny RAJOELINA (Disc Jockey) amin’izao vanim-potoanan’ny taona harivo fahatelo izao.
Amin’ny maso mijery dia azo lazaina fa tsy misy azo raisina ny resaka fitantanana ny raharaham-pirenena miaraka amin’ity lehiben’ny DAHALO ity (Andry Rajoelina).
Miaramila, mpanao gazety tradisionaly, politisianina, manam-pahaizana, olom-pirenena sns. Aiza ny andraikitra sy ny toerana misy anareo manoloana izao toe-javatra misy eto amin’ny firenena izao?
Amiko rehefa milaza ho azy fa mpitondra ny olona iray dia tokony mahafantatra ny atao hoe: »Gouverner c’est prévoir » fa tsy manao tahaka ny aliaka romotra tsy ampy taolana ka rehefa azo izay notadiaviana dia milaminna tahaka ny kisoa voky apombo.
Mampahonena ary tena mahamenatra tanteraka fa fahevendranana sy loham-boto sisa no takatrin’ny sainy RAJOELINA sy ny FORONGONY. Any vao misy fangatahana izay tena rariny sy hitsiny ataon’ireo olom-pirenena manana ny zo hangataka izany dia ny hery famoretana sy ny didin’ny be sandry no mandeha.
Araka ny naveriko matetika ho an’ireo tapaka sy namana dia tsotra:« Ry HITLER, MUSSOLINI, SADAM, BACHAR AL ASSAD, GBAGBO sns anie nihevitra ny henjana fa ny tantara no nametraka fa ZERO ry zalahy. Ity RAJOELINA ity izany dia mihevitra mihitsy fa misy ilaivana azy? Firenena tsy misy ETAT DE DROIT izany efa tsy lasa intsony. »
Mahalala menatra ianareo manohana be fahatany ny HAT fa manalabaraka tanteraka. MIZENDANA be amin’ny vola tsy nosasarana dia ilay vahoaka aminio mijaly be. Anga izy ity vanim-potoanan’ny fiforetana anaty? »
Hatsipy ny tady eny an-tandrokin’ny omby ary ny teny eny am-pon’ny mahalala fa raha mbola ny fahavendranan’ny RAJOELINA amin’ny resaka fitantanana sy ny fitadiavana ny soa ho an’ny vahoaka no asian-dresaka dia andraso eo i Paoly hoy ny fitenenana.